Top 27 ọkachamara wordpress online ụlọ ahịa gburugburu 2021
Pịa n'ime ike nke ụwa ịntanetị site na ndị a dị mfe ma dị mfe iji WordPress isiokwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ maka weebụsaịtị ọ bụla eCommerce. teknụzụ izo ya ezo siri ike, mee ka ịzụ ahịa dị n'ịntanetị dị nchedo karịa ka ọ dị na mbụ, ndị ahịa na-azakwa ebe ọhụụ ọhụrụ a nwere ntụsara ahụ, nke dabara adaba ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. n'ime azụmahịa na azụmaahịa na ngwaahịa na ọrụ, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịnabata mmemme a ugbu a. na ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara na-ele anya, na-echekwa ma nwee ntụkwasị obi na weebụsaịtị, na-agwakọta el commerce solutionsElektrọnik bara uru, leekwa anya. A chịkọtara nchịkọta isiokwu ndị a iji kwado ihe niile ị chọrọ weebụsaịtị na ebe nrụọrụ weebụ.
Jevelin bụ ọnụ ọgụgụ dị egwu WordPress ecommerce isiokwu. Ike siri ike e wuru na Jevelin's WooCommerce ecommerce ngwa mgbakwunye nyere ndị webmaster aka iwulite ụlọ ahịa n'ịntanetị mara mma ma rụọ ọrụ na nkeji. Isi okwu a na-enye ọtụtụ ohere iji hazie ụdị, mmegharị na ntụgharị nke atụmatụ katalọgụ ngwaahịa gị. > iji kpoo okporo ụzọ site na elu ụlọ na ntụgharị asụsụ njikere na njikarịcha RTL hụ na ị mezuru yandị na-ege ntị kachasị nwee ike. Gbalịa Jevelin taa wee bido ịme ahịa ndị ahụ!
Kalium bụ ọkaibe na agba WordPress pọtụfoliyo na boutique mkpokọta isiokwu na akara. Nke a bụ kpam kpam egwu na professionally mepụtara ngwọta na-enye ohere ka onye ọ bụla ngwa ngwa ikpokọta weebụsaịtị na nkeji. A na-ejikọta isiokwu a na ngwa mgbakwunye WPBakery's Page Builder, yana Revolution Slider na LayerSlider, yana ntinye ọnụ na-igbe na WooCommerce e-Commerce ngwa mgbakwunye ụlọ.
Kalium ejirila a ọtụtụ ihe dị ịtụnanya, na-apụ na webụsaịtị arụmọrụ ma na ibe ndebiri gụnyere ọtụtụ ụlọ ahịa n'ịntanetị na ndebiri eCommerce. Ire ahia ngwa ahia gi n’uwa nile enwebeghi otu a. Nke a bụ ihe kpatara yaNa mgbakwunye, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahọrọ ịmalite azụmaahịa e-commerce nke Kalium kwadoro. Gbalịa ya maka onwe gị ma bụrụ onye isi ụlọ ahịa gị!
TheGem bụ ọtụtụ okwu WordPress na ọkachamara na azụmaahịa. O bu uzo ohuru iji nyefee isi okwu na nke mmadu n’otu. Gbalịa mee ihe ngosipụta ọ bụla + 70 ya na mbubata ngwa ọsịsọ ị ga-ahụ ya! Ihe a na - anabata ihe ma na - enye pixel zuru oke eserese. Ọ dị mma maka ịkọwapụta ụlọ ahịa na echiche ngwaahịa yana veranda ya. Kporie ya WooCommerce na nhọrọ mmịfe 3 ya ọnụ. Enwere ike ịhazigharị ozi na nzụlite na mgbasa ozi. Thedị ibe ahụ nwere ike ịbụ site na ibe peeji gaa n'ọtụtụ peeji.
TheGem nwere OgweUnlimited n'akụkụ na ọtụtụ predefined nhọrọ maka h na-agụ akwụkwọ na n'okpuru. Wijetị na mpaghara ya ka a kọwaa ya ga-adịkwa. TheGem bụ echiche azụmaahịa niile na - eme ka ọ dịrị onye ọrụ mkpa ọfụma. Enwere ike idozi obi abụọ fọdụrụ na ndị otu na-akwado ndị ahịa ya! Lelee anya ma kwenye onwe gị! Lelee TheGem!
More Ama / Download Ngosi
Ọ bụrụ otu ahụ, chekwaa oge na ume site na Webify. Nke a WordPress online ụlọ ahịa isiokwu bụ oke ngwọta nke ga-eme ka ị na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ngwaọrụ a agaghị ajụ gị maka ihe nzuzo na imewe ihe ọmụma. Site n'iji adaba adaba ma dobe onye na-ewu akwụkwọ, onye ọ bụla nwere ike ịmeghe uche na imepụta ihe ma mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị elu. Ọ bụ ezie na Webify dị mma maka ọrụ ejiji,dị njikere iji, iji ole na ole tweaks ebe a na ebe ahụ, ị ​​nwekwara ike iji akụrụngwa iji ree ihe dị iche iche.
Na mgbakwunye na isi ihe ngosi, ị ga-ahụ nhazi ndị ọzọ, isi isiokwu na ụkwụ ndị akọwapụtara, ihe karịrị abụọ narị ụzọ shortcodes na-akparaghị okè sidebars. Maka ahụmịhe ịzụ ahịa na-enweghị ntụpọ na enweghị ntụpọ, Webify na-ekwenyekwa nzaghachi zuru oke na ndozi ihe nchọgharị maka weebụsaịtị gị. >
a bụ a WooCommerce Theme . Ezubere ya gburugburu ọkọlọtọ ngwa mgbakwunye WooCommerce eCommerce. Customizer avan isiokwu nhọrọceas. Gbalịa Merchandiser ugbu a ma hụ ihe ezigbo ahịa ahụ bụ!
uncode bụ ihe dị ike ma dịkwa mfe iji isiokwu eCommerce multipurpose. Ihe WPBakery bara uru na nke ọma n'ime ya dọrọ ma dobe ndị na-ewu akwụkwọ, kachasị adịchaghị mgbanwe Slider na Layer Slider, yana arụmọrụ eCommerce jikọtara ya na WooCommerce. Isiokwu a bụ ezigbo nwa akwukwo maka ịmepụta ntọala n'ịntanetị maka ụdị ụlọ ahịa niile; site na ụlọ ahịa ndekọ na ụlọ ahịa akwụkwọ na ụlọ ahịa akwa, Uncode nwere ike ijikwa ha niile ma mee ka ha dị mma. Gbalịa Uncode taa ma ju gị anya etu ụlọ ọrụ weebụ si adị mfe ịhazi!
onye na-azụ ahịa bụ ọkachamara mara mma na-anabata WordPress ọtụtụ isiokwu.A> E-azụmahịa ike na-n'ụzọ zuru ezu wuru n'ime Shopkeeper gị mma, otu i nwere ike effortlessly ere deliverables ma ọ bụ downloadable ngwaahịa, na-anakọta na-enweta ịkwụ ụgwọ, jikwaa ngwaahịa yiri nkata. N'ihi mmezi arụmọrụ ya n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime isiokwu WooCommerce kachasị ọsọ na ahịa.
Halena bụ isiokwu saịtị vasatail, oru oma na nkecha e -ahịa weebụ. Ngwaọrụ dị omimi iji nweta azụmaahịa azụmaahịa gị n'abali ọ bụla. Jiri ihe nlere di egwu kpoo ndi ozo ma mee ka ha tinye aka na ihe nlere anya di egwu na ihe ndi ozo di egwu AJAX na nyocha Ha na eme ka odi nfe ka ha ghara ichota ihe ndi ha choro.nye ohere ka ụlọ ahịa dịgasị iche iche mepee ụlọ ahịa n'ụbọchị echichi. Hazie ha n'ime nkeji oge na onye nwere nghọta na-arụ ọrụ na-ahụ anya. Tọn nke customization nhọrọ-ekwe ka ị hazie gị Halena weebụsaịtị. Dakọtara gị ụlọ ahịa ika na-ahazi akụkụ nile nke ọgwụgwụ gị ọrụ nchọgharị ahụmahụ. Halena na-enye gị ngwaọrụ ịkwesịrị igwu egwu na ụmụ nwoke ndị nwoke. Were Halena zụọ ahịa gị na ahịa gị n'akụkụ ụwa niile! >
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe nrụọrụ weebụ eCommerce, nke a bụ isiokwu nke ụlọ ahịa n'ịntanetị The WordPress Hanger onye nwere ike mee gị ya. Na ngwugwu ahụ, isiokwu ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ iji hapụ gị ịmalite ụlọ ahịa ọkachamara n'ịntanetị ngwa ngwa o kwere omume site na obere ọrụ k etinye. Dị ka gịga - achọpụta n'oge na - adịghị anya, Ihe mkpuchi ahụ nwekwara ọtụtụ ọdịnaya na - igbe igbe nke ị nwere ike iji mee ihe dịka ọ dị. Naanị lelee ngosi ngosi dị ndụ maka nghọta ka mma. Otu ọ dị, ị nwere ike tweak ngalaba nke ọ bụla nke The Hanger ma mee ka ọ soro akara gị na T. Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ, ị nwere ike ịmalite site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị site na isi ma gbanwee ya, Hanger na-ejikwa ya niile. E wezụga ya Baịbụl hiwere isi n'ebe nke bụ, n'ezie, e-azụmahịa, The hanga na-agụnye a idiocha blog. Akụkụ ahụ dị ịtụnanya na ị gaghị achọ ịhapụ ya oghere ma jiri ya maka azụmaahịa ọdịnaya.
A Isiokwu nke ụlọ ahịa WordPress online, dị ka Hongo , bụ ngwa ọrụ ga - eme ka ị nwee mmasị ozugbo.dị iche iche na ntanetị. Ma ịchọrọ ịre uwe, ngwa, akpa, elekere, akụrụngwa, ngwaahịa akpụkpọ anụ, wdg, mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na Hongo ugbu a. Enwere otutu akụrụngwa dị njikere iji rụọ ọrụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ịrapara na igbe na-apụ apụ, Hongo na-ekwe nkwa webụsaịtị arụmọrụ zuru oke na ịpị aka ole na ole. - enyi na enyi WPBakery peeji nke. E-commerce ọ bụla ọzọ nwere ike ịbụ akụkụ na akụrụngwa bụkwa akụkụ nke azụmahịa ahụ. Site na ihe ndi ichoro na ngwa ngwa iji nweta nzacha nzacha, agba agba, ihe eji eme ihe na ebe edeputara, Hongo na enye ihe obula na ihe nile ichoro. CiyaShop
CiyaShop bụ ndezi na nifty WordPress isiokwu ụlọ ahịa na-enye gị ohere ịmepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Enweghi oke ike na ngwa a bara uru maka iwuli ikpo okwu eCommerce. N'ezie, naanị mmachi ị nwere ike iche bụ nke gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ mmụọ nsọ, lee anya na ngosipụta iri anọ gụnyere wee hụ ihe ga-ekwe omume site na ndebiri saịtị a. Mana nke mbụ, jiri otu pịa pịa dị ịtụnanya ma malite ngosi gị n'otu ntabi anya. CiyaShop nwere ngụkọta nke usoro nhazi na ngalaba 160 ka ọ wuchara, nhazi nke ndụ na ọtụtụ plugins adịchaghịenweghị ụgwọ ọzọ. Bido ire ere na CiyaShop ugbua!
More Info / Download Ngosi MyMedi
Iwuli onwe gị ahịa ọgwụ ma ọ bụ online ọgwụ ụlọ ahịa bụ a snap na MyMedi. Ikwesighi ime ihe dịịrị onwe gị mgbe ị nwere ike ịhapụ MyMedi ka ọ lekọta ya kama. N'iburu nke a n'uche, ị na-elekwasị anya naanị na ngwụcha, na-agbanwe MyMedi na ụkpụrụ iwu aha gị. Ọzọkwa, ị nwekwara ike dezie ya na ọbụnadị mepụta peeji ndị omenaala.
MyMedi na-ewetara gị atụmatụ dịka arụmọrụ dị mma, ndakọrịta mkpanaka, Ntugharị Ntugharị, ndepụta ịchọrọ, ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ngwaahịa a zụtara ọtụtụ ugboro, ịkpọ aha ole na ole. Na ngwaahịa ire ị nwekwara ike ịde blọgụ ma bulie azụmaahịa gị site na ịre ahịa ọdịnaya.a
Aora bụ ụlọ ahịa isiokwu na WordPress akara maka ihe niile metụtara ụlọ na ibi ndụ. Mepụta ebe nrụọrụ weebụ eCommerce mara mma ma na-emetụta ihe ga-ewe gị obere oge iji mechaa. Site na ọtụtụ nhazi nke edepụtara na usoro ịdọrọ na-adọkpụ, ị chọghị ahụmịhe ọ bụla iji bido azụmaahịa gị n'ịntanetị n'ụdị.
Plus, Aora na-elekọta usoro niile nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. , na-eme ka arụ ọrụ siri ike n'oge niile. Tinye na ụgbọ ibu, nchọta ndụ, ire ere ọkụ, Ntugharị Ntugharị, na ịpị ịpị pịa bụ ụfọdụ atụmatụ dị mma ekwesiri ịkọ. ning. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-enweta na Kit Aora.
ọla ga-abụ ezigbo enyi gị n'oge okike, njikwana ndozi ụlọ ahịa ọla. Site na njirimara ntakịrị na nke mara mma, ị ga-adọrọ uche onye ọ bụla. Enwere ederede dị iche iche na ibe dị n'ime ịhọrọ, nke ha niile nwere ike ịdezi nke ọma. Na nke a, ị nwere ike ịmepụta ụdị ọla gị ma bido ntanetị n'ịntanetị. Dị ka onye mbido, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọtụtụ nkuzi vidio nke ga-enyere gị aka ịghọta isi ihe tupu ịmalite itinye aka na ya. Buru n’uche, Bijoux na-arụkwa ọrụ ebube maka ụdị ọla. >
Orson bụ ntụkwasị obi, ịba uru ma na-aza WordPress isiokwu ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ isiokwu. Ọ bụ ngwa ọrụ ọhụụ maka webmasters na-achọ ịtọlite ​​azụmaahịa.tinye ntanetị n'ụzọ dị irè. Site na WPBakery Page Builder dị ike wuru, ihe eji eme webusaiti bụ snap. Orson zuru oke maka otutu ngwa ahia. Nwere ike ikpuchi ikpe ọ bụla na ibe ya dị iche iche iri abụọ na atọ ị nwere ike idokwa. Storeslọ ahịa ejiji oge ọkọchị ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị na-eto eto na-eto eto na-eche ihu ọhụrụ. Ngwa na ọla , ngwongwo egwuregwu ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka, Orson dịịrị gị. Bubata demos na sekọnd ma hazie ha nke ọma. Ahụmịhe nzuzo gị gara aga adịghị mkpa ma a bịa n'inweta nnukwu atụmatụ. Lọ ahịa Orson dị oke mma ma rụọ ọrụ dika amara. Ofdị ụdị isi eji egwu na obere akpa obere akpa dị maka gị. Ntughari mgbanwe aOmie carousels mara mma na ihe ngosi mmịfe. Nwere ike ime ka ndị na-ege gị ntị na-etinye aka ka ha na-agagharị na katalọgụ ngwaahịa gị. SEO njikarịcha na-eme Orson ihe ọkpụkpọ siri ike na ogo nchọta ọchụchọ. N'ụzọ dị otu a, ị na-abawanye okporo ụzọ gị, ahịa na ego ị na-enweta n'abalị. Ngwa mgbakwunye WooCommerce na-enye ike Orson nwere ike azụmaahịa, site n'ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ gaa ụgbọ ibu azụmahịa. Mee Ore na ire ere taa, ya na Orson!
bụ nke a na-anụcha nke ọma
si WordPress. Isiokwu a gụnyere ihe karịrị iri na abụọ 12 dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ ngosi. Ọtụtụ isi, ụkwụ, ihe mmịpụta ngwaahịa ahaziri iche nwere mmetụta dị ịtụnanya, nhọrọ ngosi Parallax dị egwu na AJA n'ihu ahịa ịzụ ahịa.X nwere ụdị mmemme dị iche iche… n'ezie enweghị njedebe na Atelier Gosipụta ezigbo ike nke okike ụlọ ahịa n'ịntanetị. Nwa amaala SEO na azịza zuru ezu na-emechi nkwekọrịta ahụ na Atelier, isiokwu e-commerce kachasị ike dị iche iche n'ahịa.
Demo Mr. Na-akwa uwe
Nkwa akwa bụ isiokwu na-ewu ewu nke na-egosipụta ya na mmịfe ihu ya. Okwesiri ndi nwere ahia ahia na ndi ahia ndi choro ire ahia ha na ntaneti. Ọ bụrụ n'ịchọghị imepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ị ka nwere ike iji isiokwu a kwalite azụmahịa gị ma ọ bụ gosi ngwaahịa gị na atụmatụ gị n'ụwa site na iwepu atụmatụ eCommerce ya na ngalaba nhọrọ isiokwu. Mr. . The Tailor WordPress isiokwu awade ịrịba ama isiokwu customization nhọrọ maka gị.Ha bụ nhọrọ agba na - akparaghị okè, nkwado onyonyo parallax, bulite akara ngosi omenaala, isi ihe na - ejide anya, ihe eji ewu na ya na ọrụ ndị ịchọrọ. Ihe WPBakery wuru n’ime isiokwu a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe imepụta nhazi ihu akwụkwọ na - akparaghị okè site na iji dọrọ na dobe interface. Na mgbakwunye, Maazị Tailor bụ WooCommerce dị njikere iji nyere gị aka ire ngwaahịa, dijitalụ, ma ọ bụ ngwaahịa mgbakwunye na ịdị mfe. Isi okwu a nwekwara njikwa ụlọ ahịa dị ike, usoro nyocha, usoro ụtụ na nhọrọ mbupu, ngalaba na-akparaghị okè na obere ngalaba, sistemụ wuruwuru wuru,
peeji nke ịkwụ ụgwọ na ihe dị mfe maka ihe mgbako. Maazị Lorkwa akwa na-enye ndị ahịa ohere ịkọ ọnụego ma ọ bụ ịkọ ọnụahịa gị, nyere gị aka nyochaa mkpesa ụlọ ahịa gị, yana njirimara nhọrọ nhọrọ gị. Ozi ndị ọzọ / Download Ngosi
Vapas bụ a nic The WordPress web store isiokwu maka online vape na-echekwa. Na ewu ewu vaping, enwere ezigbo ohere ị ga-achọ ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ. N'iji Vapas dị ike ma dị mfe iji, ị nwere ike ugbu a ngwa ngwa wuo ọnụnọ n'ịntanetị. Na-enweghị mkpa ka ị bụrụ teknụzụ, ị nwere ike ịmalite ịnye ngwaahịa vaping na ịntanetị dị ka pro. Site na nchikota nhazi nke mbu na WPBakery peeji nke wuru, onye obula nwere ike kpuputa ngwa ahia nke mbu. Blog na otutu akwukwo ndi ozo di n'ime ya. . Na mgbakwunye, ị nwere ọtụtụ wijetị, Ntugharị Ntugharị, ọchụchọ Ajax, nhọrọ menu , ihe ngosi dị egwu, na menu ndị na-eme ihe ike.agwaetiti mara mma. Maka obere ego, ị nwere ike ịmalite azụmaahịa dị n'ịntanetị ugbu a wee rụpụta ihe dị iche na Vapas.
maka usoro nri na ụlọ nri, Mildhill bụ ezigbo ụlọ ahịa WordPress isiokwu iji dozie ọnụnọ n'ịntanetị kpamkpam. Nwere ike nweta ihe site na otu nke itoolu dị iche iche, okike, na demos mmetụta dị ukwuu. Buru n'uche na nhazi niile nke Mildhill bụ 100% hazie na-enweghị mkpa imetụ ma dezie otu akara koodu. Mkpokọta nke WPBakery na-ewu akwụkwọ na-emepe ohere na-enweghị njedebe n'agbanyeghị agbanyeghị ikike gị. Mildhill na-abịa na atụmatụ na ọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya ga-enyere gị aka pụọ ​​na igwe mmadụ. Tọn nke ihe, peeji dị n'ime, nhazi blog, ụzọ dị mkpirikpi, na ụdị isi.isi na-akọwa ma dịrị njikere ka ị nweta ọtụtụ ihe na Mildhill. Tinye aka site na ị na-ebubata onye na-ebubata data ngosi nke otu ck ma bido na ụzọ ziri ezi na-eme ka Mildhill na-emewanyewanye mma.
Artemis bụ WordPress vasatail
ọkachamara na ahia e-commerce. Ọ dị mfe ịghọta na hazie ya kensinammuo otu-pịa ngosi mbubata. Chọta ya na onyinye pụrụ iche ma dakọtara na ọtụtụ plugins kacha mma. Artemis nwere nhazi azịza nwere ọtụtụ nhọrọ maka menus na agba na-akparaghị okè. Ọ na-agụnye ụlọ ahịa dị ike dị egwu, ibe blog, na omenala ndị nwere ike ịhazi. Ga-ahụrịrị ngalaba ogo na favicons ahaziri iche. Artemis na-enye njikọ WooCommerce iji melite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị jụụ. O nwereEnwekwara minicart, ndepụta ndị chọrọ yana ibe ịkpọtụrụ ga-akọwa. Gbalịa ụdị veranda dị iche iche iji gosi ngwaahịa ndị ahụ. Njikọ ngbanwe Ntugharị
na-enye ohere onyonyo iji nweta ngosipụta kacha mma!
Artemis adịla njikere maka ntụgharị asụsụ ya na ma po. faịlị na nke ejiri ngwunye ọhụụ gosipụtara. Ọ na-enye gị akwụkwọ nlegharị anya, nlele ngwa ngwa nke ngwaahịa na nchịkọta nke nkata menu. Ndị okike kere Artemis ka ọ bụrụ onye na-eweta ọrụ azụmaahịa kachasị mma. Dị nnọọ ka aha ya, nke chi nwanyị. Ọ bụ 100% ma na-emegharị na ntanetị, usoro na ihe nchọgharị. Egosipụta na nke kachasị mma! Ọ na-abịa na mmelite n'efu na nnukwu akwụkwọ! Lelee Atemis anya nke ọma, ọ ga - ejide n'aka na ọ ga - eme ka ị kwenye na nzuzu ya! Jiri Artemis!
More Ama / Download Ngosi June
Ja ba a a multipurpose, a pụrụ ịdabere na na vasatail WordPress e-commerce website isiokwu. Ngwaọrụ na-enweghị ntụpọ maka iwulite webụsaịtị ọhụụ na nke pụrụ iche. Gwakọta plugins adịgboroja, weebụsaịtị, na ndebiri peeji iji meziwanye ọrụ gị. Idozi ihe na ịhazi ihe ntanetị na-ahapụ gị ka ị chepụta dịka pro na-edeghị akara nke koodu. Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche na-arụ ọrụ na June. Pọtụfoliyo peeji dị egwu na ibe ngwaahịa pụrụ iche gosipụtara ngwaahịa gị n'ụdị. Slider Revolution na LayerSlider na-eme ka ị na-atọ ndị na-ege gị ntị ntị na ihe ngosi dị mma. ILightbox dị egwu na Apple Live Photo ihe ngosi na-eme ka ọdịnaya gị pụta ìhè. Igwe WooCommerce agbakwunyere na-enye gị ohere ịre ahịa ngwaahịa gị na-enweghị ịgbaji ọsụsọ. Grids ụlọ ahịa dị egwu, ndepụta na nzacha omenala wetara ụlọ ahịa gị na 21st narị afọnarị afọ. Na-azaghachi ma na-arụkọ ọrụ ọnụ, June na-agbasawanye ndị na-ege gị ntị n'abali. Nweta June taa ma lelee azụmaahịa gị ka ọ na - eto! >
Mee ka ahịa gị na ụlọ ahịa WooCommerce na-agbanwe agbanwe na obodo. Ewebata Shoperific, a WordPress online ụlọ ahịa isiokwu nwere n'ụzọ dị ịrịba ama kachasị egosipụta, na-ebuso ụdị azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ ụdị ọ bụla. Na-elekwasị anya na ecommerce, ndebiri saịtị a na-enye gị ohere igosipụta ngwaahịa dị ịtụnanya, rụọ ọrụ na nhọrọ ịkwụ ụgwọ, ma gbakwunye ndepụta ịchọrọ maka ndị ahịa gị. tinye nkọwa zuru ezu banyere ngwa ahịa gị. E wezụga nke ahụ, ịnwere ike iji blọọgụ maka ịre ahịa ọdịnaya ma mepụta azụmahịa karịa. Na mgbakwunye, ndebiri niile na-agbanwe agbanwe ma na-emezi yana ihe niile dị na ngalaba, yabụui na-eme ka ọ dị nnọọ n'usoro na mfe iji. Ihe dị iche iche gụnyere menu omenala, tebụl, ogwe ọganihu, ndepụta ọnụahịa, ntanye ngwaahịa, na Google Maps. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịbụ onye ọchụnta ego azụmaahịa na ịpị aka ole na ole site na ntinye ọrụ dị njikere nke Shoperific na-etinye n'aka gị. Omume
bu ihe kwesiri ntukwasi obi WordPress isiokwu maka ahia na ahia. Ọ bụ isiokwu WordPress siri ike na vasatail nke edere n'ụzọ doro anya maka ebumnuche nke ijikwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ọkachamara n'ịzụ ahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ọ bụla. -en, atụmatụ na ndebiri jikọtara na gburugburu kensinammuo. na interface njirimara dị ike nke na-eme ka mmadụ niile nwee ike ịmepụta ụlọ ahịa has ọkachamara àgwà online na nkeji. Na mkpokọta, Handy bụ isiokwu kachasị n'ịntanetị maka ndị omenkà, ndị na-ese ihe na ụdị azụmaahịa ọ bụla dị mkpa chọrọ ịtọ ntọala siri ike maka azụmaahịa ha n'ịntanetị. Aurum
Aurum bu ihe echefu echefu ma jiri obi uto gosiputa WordPress online isiokwu. Isiokwu pụrụ iche e kere iji bụrụ ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma maka ụlọ ahịa na ntanetị n'ịntanetị. Ndị mmepe ejirila nhazi, ndebiri, wijetị, ngwaọrụ, na ụzọ dị mkpirikpi kwakọba ya maka iwulite weebụsaịtị webụsaịtị ọgbara ọhụrụ Mana ezigbo ike Aurum dị na nkà ihe ọmụma mara mma. Isiokwu a bụ ntakịrị ihe na-adịghị mma ma dị mma nke na-emetụta n'ọtụtụ peeji nke weebụsaịtị na weebụsaịtị Aurum. Aurum dị mma maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-eleba anya na ngalaba ahịa maara nke ọma, gụnyere ụlọ ahịa ejiji
, ụlọ ahịa ọla, ụlọ ahịa akwụkwọ,
ụlọ ahịa teknụzụ
na ndị ọzọ. ọrụ e-commerce. Isi okwu a dịkwa mma maka weebụsaịtị n'ihi ịdị nfe nke ị nwere ike iji akara njirimara ọ bụla ịchọrọ. Na mgbakwunye, ọ mara ezigbo mma na mmegharị ya dị ọcha ma dịkwa jụụ. Na mgbakwunye, Aurum na-eji ngwaọrụ ọkaibe dịka isi ederede, ihu akwụkwọ nnabata mara mma, omenala WPBakery Page Builder ụzọ mkpirisi, yana atụmatụ maka arụmọrụ ndị ọzọ. Na nkenke, Aurum bụ ihe akaebe na mgbe ụfọdụ ihe na-egbu maramara nwere ike ịbụ ọla edo. More Info / Download
Ngosiputa okwu na nlezianya anya nke oma na emegharia m. Nwere ike iji plethora nke ngwa ngwa ngwa ngwa n'etiti, dị ka Nantes na-ebuli ihe atọ. Nke mbu, o nwere ike ire ngwa ahia na ahia, debe ha ma nye ha ndi mmadu. Nke ọzọ, ikike inyere ndị webmaster aka ịwepụta ọkpụkpụ a na-atụ anya ịtụkwasị obi nke AJAX maka ngwa websaịtị dị mgbagwoju anya. Ọ na-ezute ma karịa karịa atụmanya nke ụlọ ọrụ, e-commerce na izugbe weebụsaịtị ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na usoro ya dị ike nke ọkwa dị elu. Isiokwu a nwekwara ihe pụrụ iche ịdọrọ na dobe ndị na-ewu akwụkwọ yana nkwado zuru ezu maka WooCommerce. N'ikpeazụ, Nantes nwere ọmarịcha menu mkpanaka, ịmịcha na ịkpa aka, nkata, nkata AJAX, ọchụchọe nke ngwaahịa na nzacha. Na mmechi, Nantes bụ isiokwu a na-eme nke ukwuu, ọ na-eme ka ndị ọzọ bụrụ ndị jọgburu onwe ha. More info / Download
North bụ ihe mara mma
ahia isiokwu WordPress multipurpose elektrọnik. isiokwu a bụkwa ọkachamara na-ele anya, na-egbu maramara, mara ihe na ngwa ngwa. North ga-adị mma maka ngwa niche ọkachamara dịka ụlọ ahịa dị elu n'ịntanetị, ụlọ ahịa ntanetị n'ịntanetị. Ọ dịkwa oke mma maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ndị na-ese ihe ma ọ bụ ụlọ ahịa ihe osise n'ịntanetị na azụmaahịa ndị ọzọ yiri ya. I nwekwara ike ịmepụta ihe mgbawa, mmetụta dị elu na ibe weebụ dị ịtụnanya na nkeji na-enweghị ihe ọmụma nzuzo chọrọ.. Ndị ọrụ ikpeazụ nwekwara ike iji ya. You nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe nchọgharị a na-eji nwayọọ eme nke ọma site na iji menu nhọrọ aha ya, akụkụ ndị nwere ike ịhazi, na carousels ngwaahịa mara mma. Isi okwu a nwekwara pọtụfoliyo na-adọkpụpụ ngwaahịa, ibe peeji nke Parallax, njikọta nke WooCommerce, yana njikarịcha injinị nyocha. Na mkpokọta, North bụ isiokwu maara ebe ọ na-aga. >
Oxygen bụ mara mma fechaa WooCommerce WordPress isiokwu. Ndị okike wuru isiokwu a mara mma n'ebumnuche nke iwulite ihe eji eme ecommerce WooCommerce zuru ezu, nke zuru oke, ma jiri nlezianya dozie ya. Isiokwu a dịkwa mma maka ụlọ ahịa na ntanetị nke pere mpe na ọkara na-achọ ịchekwaa onyonyo ha na ndị ahịa ha. The multiple mNtọala peeji nke Oxygen na ndebiri peeji, nke ị nwere ike ịwụnye ngwa ngwa, ha niile na-elekwasị anya na ahụmịhe igodo onye ọrụ dị mfe. Ọzọkwa, isiokwu a na-achọ ịduzi gị na ebe nrụọrụ weebụ gị mgbe ị na-eche ka ịnọ n'ụlọ n'otu oge. Ọ na - eme ka ndị ahịa gị nwee ntụsara ahụ iji were ego ha na ngwaahịa gị wee bụrụ ndị ahịa izizi. N'ihi ya, ha nwere ike ịlaghachi zụta na weebụsaịtị gị. Tụkwasị na nke a, njirimara akụkụ akụkụ mara mma nke Oxygen, ụdị isi isiokwu, na atụmatụ ndị bara uru ga-eme ka afọ ojuju ndị ahịa gị nke ga-atụgharị gaa ahịa. N’ikpeazụ, Oxygen na-eji ngwa AJAX dị elu na HTML5 arụ ọrụ iji kuru ikuku ikuku n’ime ụlọ ahịa na ntanetị ọ bụla. Gbalịa ya taa! Daalụ maka ileta Colorlib na ịgụ isiokwu a! Anyị nwere ekele dị ukwuu maka ya! Isienant, ị nwere ike ịmụta otu esi mepụta mkpokọta
site na iji free anyị WordPress gburugburu. Nkwupụta: Ibe a nwere njikọ nke ndị mmekọ ndị ọzọ na mee ka anyị nata ọrụ ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịzụta ngwaahịa ahụ a kpọtụrụ aha. Echiche ndị dị na ibe a bụ nke anyị ma anyị anaghị enweta ego ọzọ maka nyocha dị mma.
23 acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na eco-enyi na enyi WordPress word 2021
2021-07-21 18:38:45 | Weebụsaịtị
Nke a bụ ndepụta kachasị dị omimi nke ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na eco-friendly WordPress gburugburu dị na ahịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmekọrịta enyi na enyi ma ọ bụ nwa amaala dị ala nke ụwa, nyiwe WordPress nwere ike ịnye gị ala. Kedu ka o si eme? Nke mbu, ọ na-ewepu ihe mgbochi ego. Tọ ntọala akaụ...
16 kacha mma vinteji na ochie wordpress gburugburu maka hipsters 2021
2021-07-21 18:25:25 | Weebụsaịtị
Na-achọ ihe kacha mma Devid agụghị ndị gbara na ochie WordPress isiokwu na-eguzo na nke a oge a? N'ebe a, ị ga-ahụ isiokwu hipster kachasị mma maka obere azụmaahịa, ụlọ nri, ebe a na-akpụ isi, ịde blọgụ, webusaiti ndị ọzọ na ndị mmadụ hụrụ mmetụta nke agụụ mgbe ọ bụla ha gafere n'oge gara aga. Nke a...
Top 25 kacha mma ọhụrụ wordPress gburugburu 2021
2021-07-21 18:17:41 | Weebụsaịtị
Nchịkọta ejiri nlezianya debe ederede WordPress kachasị mma nke gosipụtara ọtụtụ ngosi, ibu nke atụmatụ, yana onye na-arụ ọrụ ihu igwe. Ezigbo onye ahịa anaghị ada mgbe ọ bụla iji ohere, ịntanetị bụ ọla edo edobere ahapụghị anya. Afọ ole na ole gara aga, ebe nrụọrụ weebụ abụghị ihe ọ bụla karịa ngwa...
27 kasị mma wordpress agbamakwụkwọ Gburugburu 2021
2021-07-21 17:59:25 | Weebụsaịtị
A ndepụta ndepụta nke kacha mma WordPress agbamakwụkwọ gburugburu na 2021 na karịrị. Isiokwu ndị a nwere ihe niile iji mepụta weebụsaịtị agbamakwụkwọ a na-echefu echefu iji gosi ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị. Agbamakwụkwọ gị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na ndụ gị. Ihe niile kwesiri ịbụ ihe zuru...
43 ewu ewu otutu okwu ederede 2021
2021-07-21 17:26:31 | Weebụsaịtị
Na nso nso a, m gbara ọsọ nnwale: enwere m ike iji ọtụtụ WordPress gburugburu maka ọtụtụ weebụsaịtị weebụ? (Na-enweghị ha maara ya. ) Mmechi? Bet nzọ m nwere ike! Maka nke ahụ, amụrụ m ọtụtụ narị isiokwu wee mechaa họrọ ndepụta nke 44 dabere na ọnụọgụ demos dịnụ, ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ ndị ha dakọtara, ...
23 kacha mma ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ WordPress word 2021
2021-07-21 17:10:29 | Weebụsaịtị
Taa, anyị ga-eleba anya na ego WordPress maka ụlọ ọrụ ntinye ego, ụlọ ọrụ ego na ọbụlagodi ụlọ akụ na ntanetị na ọrụ ịgbazinye ego. Otu nwere ike ịhụ ihe kpatara nrụgide ahụ ji dị ukwuu, n'ihi na mkpa maka saịtị Na-adọrọ adọrọ karịa mkpa ahịa ndị ọzọ niile. Ọ kachasị mma ịbanye na onye na-ajụ ase eb...
16 ọla ịchọ mma wordpress maka ecommerce saịtị 2021
2021-07-21 16:53:39 | Weebụsaịtị
Looking na-achọ ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ eCommerce iji gosipụta ma ree ọla? Ihe ịchọ mma WordPress a bụ kpọmkwem ihe ịchọrọ iji gosipụta azụmaahịa ọla gị ma ree ngwaahịa gị n'ịntanetị, ọtụtụ ndị ahịa ga-ajụ ịme azụmahịa na weebụsaịtị dị ala. Iji kpalie obi ike ma gbaa ahịa ume, ịkwesịrị ijide n'aka ...
30 kachasị mma nyocha isiokwu nke 2021
2021-07-21 16:41:30 | Weebụsaịtị
Nnukwu ndepụta nke ọhụụ na ọkachamara na-agba izu na WordPress gburugburu iji bulie azụmahịa gị taa kama ị na-eme anwansi ahụ n'onwe gị ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ dị elu iji were onye ọrụ, ị nwere ike ịme ngwa ngwa na isiokwu dị mma. Ọ naghị ewe gị ogologo oge, mana ngwaahịa ikpeazụ ị ga - enweta ga - abụ...
Top 17 Mgbakwunye Ahịa WordPress WordPress 2021
2021-07-21 16:32:22 | Weebụsaịtị
Tochọrọ ịmalite ngwa ngwa weebụsaịtị mgbakwunye? Isiokwu a nke WordPress maka ndị na - ere ahịa mgbakwunye bụ ihe ị chọrọ. Iliarmara bụ ihe bara uru dịka ndị ọrụ na-enwe ahụ iru ala karịa ileta ma na-emefu ego ha...
18 ọkachamara ngwá ụlọ wordpress gburugburu 2021
2021-07-21 16:21:59 | Weebụsaịtị
Nchịkọta nke ngwongwo kachasị mma WordPress gburugburu ga-enyere gị aka igbo mkpa nke ndị ahịa gị niile ma lanarị ndụ ọsọ ọsọ nke ndụ, dịka isiokwu ndị edoziri tupu oge a nwere ike ịbụ ezigbo nchekwa oge, ọkachasị mgbe ịchọghị. ịtụ. Ajụla ndị ahịa gị n'ihi na asọmpi n'ahịa ịzụ ahịa weebụ siri ike, j...
50 kacha mma woocommerce gburugburu iji wuo estore 2021
2021-07-21 16:16:45 | Weebụsaịtị
Ka anyị lelee WooCommerce WordPress kachasị mma maka ụdị ecommerce ọ bụla. Anyị ejirila nlele ngwaahịa AJAX, gburugburu mara mma, ọtụtụ ọdịiche dị iche iche na nkwado dị ukwuu ahọrọla isiokwu. Anwee weebụsaịtị bụ ngwa nkwado dị ike ma dị ọnụ ala anyị nwere ike iji wulite mmekọrịta n'etiti ndị ahịa a...
14 kacha mma ụdị ụlọ ọrụ wordpress gburugburu 2021
2021-07-21 16:11:01 | Weebụsaịtị
N'ebe a, ị ga - ahụ ụdị ụlọ ọrụ kachasị mma maka WordPress saịtị ị nwere ike iji maka websaịtị gị ma ọ bụ ọrụ gị. Ihe nnọchianya nke ihe pọtụfoliyo kachasị ọhụrụ nke na-egosi ụdị na ụdị ejiji na ntụpọ nke aka ha Nke ahụ bụ ebumnuche anyị mgbe anyị bidoro ịkọwapụta ndepụta isiokwu ụlọ ọrụ ihe atụ a; ...
Top 25 wordpress maka freelancers 2021
2021-07-21 16:06:59 | Weebụsaịtị
Ihe kachasị mma ma dị mfe iji WordPress gburugburu maka freelancers nke ga - enyere gị aka ịbawanye ikike gị. Ewu ewu na ịntanetị emeghewo ọnụ ụzọ maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ ma nweta ndụ dị ka ndị nweere onwe ha. N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-enwere onwe ha n'ihi ịdị mma na nnweta nke ịrụ ọrụ site n'ụlọ, na n...
Isiokwu kachasị mma maka ndị na-ede akwụkwọ na ụlọ ọrụ ụlọ 2021
2021-07-21 15:52:46 | Weebụsaịtị
Nchịkọta zuru ezu nke kachasị mma WordPress gburugburu maka ụlọ ọrụ, pọtụfoliyo na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ onwe ya na blọọgụ Ọdịdị na-abụkarị ọrụ niche n'ihi nkọwa ya na ụgwọ dị elu. Na azụmahịa a ị nwere ike ịnweta ụzọ ole na ole, mana ị nwere ike ịnweta nde mmadụ na ha. Ọzọ ọ bụla na azụmaahịa...
20 dị egwu n'efu 2021 bootstrap navbars ihe atụ
2021-07-21 15:37:25 | Weebụsaịtị
Mepụta usoro kachasị mma, nke kachasị mma, ma dị mfe site na ndebiri Bootstrap igodo anyị n'efu You maara na ogwe ihe nchọgharị ma ọ bụ menu bụ ihe dị oké mkpa - NA A ghaghị - akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. ọkọ. Chekwaa oge na ego! Informationnweta ozi bara uru na ibe ga-adịrị ndị ọrụ gị mfe. ...